COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 12 JONA 2021 - ewa.mg
COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 12 JONA 2021
News - Santé - COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 12 JONA 2021
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 12 JONA 2021 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
Isan’ny nanaovana fitiliana: 481
Tranga vaovao: 39
2 Matsiatra ambony
Tranga Misy fahasarotana: 97
1 Atsimo Atsinanana
L’article COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 12 JONA 2021 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Nivoaka tamin'ny : 13/06/2021
Kalandrie gregorianina: maizim-bolana ny fanombohan’ ny taona 2021
Miaka-bolana hatrany ny fanamarihana ny taombaovao malagasy sy ny fanaovana fety aman-danonana. Tsy nijery izay anefa ny kalandrie gregorianina fa ny 1 janoary ihany ny fanombohan’ny taona. Maizim-bolana ny taombaovao 2021 amin’ity.Na mbola eo aza ilay tsy fitovian-kevitra eo amin’ny samy mpahay fomba, misy ny iraisana ma­no­loana ny zavatra sasany. Anisan’izany ny fanamarihana ny taona vaovao. Samy ma­­naiky ny rehetra fa tsy man­kalaza ny andro voalo­han’ny taona amina vanim-po­toana maizim-bolana ny Ma­lagasy. Tsy nametraka izay ny fanisana andro vahiny sa­sany tahaka ny kalandrie gregorianina. Amin-dry zareo ma­mpiasa ity fanisana andro ity, na miaka-bolana na maizim-bolana ny 1 janoary, iny ihany no voalohan’ny taona. Ho an’ity taona 2020 hiampita ho any amin’ny taona 2021 ity, tafalatsaka ao anatin’ny maizim-bolana ny 1 janoary 2021. Raha ny filazan’ireo mpahay fomba, amin’ny ankapobeny, tsy mifaly ao anatina maizim-bolana ny Malagasy fa mikendry hatrany ny volana miakatra. «Amin’ny Mala­ga­sy, fanorenana ny miaka-bolana fa fandravana kosa ny midim-bolana», hoy ry zareo. Saika natao tao anatin’io mi­aka-bolana io avokoa ireo lanonana lehibe teo amin’ny fiarahamonina malagasy. An­isan’izany ny fitokanan-trano. Ho an’ireo mpahay fo­mba: «mila mahafantatra ny fomba amam-panaony ny Ma­lagasy raha tiany ny handroso. Ny momba antsika ihany (teny, fomba, tany…) no fototra hanorenana ny fandrosoana». Na izany aza, samy mahatsapa izy ireo fa tsy mora ny fanatanterahana izany no­ho ny antony maro. Iray amin’ireny ny fiheveran-tena fa vahiny eto amin’ny taniny!HaRy RazafindrakotoL’article Kalandrie gregorianina: maizim-bolana ny fanombohan’ ny taona 2021 a été récupéré chez Newsmada.
Fanafihana sy fanolanana :: Mpanao asa an-terivozona no tompon’antoka
Fanafihana efatra niampy fikasihan-tanana sy fanolanana vehivavy lehibe roa no nitranga tao amin’ny fokontany Miaramasoandro, Atsongo, Mahafaly ary Vatofotsy, nanomboka tamin’ny faramparan’ny volana jona hatramin’ny tapatapaky ny volana jolay teo. Fantatra telo lahy mbola misazy asa an-terivozona niampy lehilahy iray vao avy namita sazy tany am-ponja, iray volana monja izay, no voatondro ho tompon’antoka tamin’ireo. Samy nalefa any amin’ny fonjan’i Tsiafahy avokoa izy ireo, taorian’ny fampiakarana ny raharaha teo anivon’ny Fampanoavan’Antsirabe, tamin’ny alakamisy. Roa lahy hafa voalaza ho nandray sy nividy ireo entana halatra kosa no voatazona vonjimaika ao amin’ny fon- jan’Antsirabe. Saika nitovy avokoa ny fomba nisehoan’ireo asa ratsy ireo. Miditra an-keriny ao amin’ilay tokantrano ireo jiolahy. Mikasi-tanana ny lehilahy izy ireo, avy eo manangona ny vola, firavaka, finday, solosaina sy ireo entana lafo vidy. Ho an’ilay tokantrano tao Atsongo kosa dia io niampy fanolanana vehivavy lehibe io. Nanampy tamin’ny fikarohana an’ireo jiolahy ny fampiasan’ny iray tamin’izy ireo ny finday azony nandritra ny asa ratsiny. Narahina hatrany ireo antso nataony ka tamin’ny alalan’ireo olona nifandray taminy matetika no nahafahana nanao ny vela-pandrika. L’article Fanafihana sy fanolanana :: Mpanao asa an-terivozona no tompon’antoka est apparu en premier sur AoRaha.
Nisantatra ny asa voalohany ho azy Andrianirina Laza Eric Donat, tale jeneralin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco), omaly. Ny fiaraha-miasa miaraka amin’ny Vokovoko Mena Malagasy (CRM) no nanokafany an’izany ka hifototra amin’ny fanabeazana sy fanaraha-maso akaiky ny fomba fiasan’ireo mpikambana ao anatin’ity fikambanana misehatra amin’ny lafiny sosialy ity ny fifanarahana. Haharitra roa taona io fifanekena eo amin’ny Bianco sy ny CRM io. Ny tale jeneraly roa tonta no nanatanteraka ny fifanaovan-tsonia, teny amin’ny foiben’ny Bianco Ambohibao, omaly. Nandritra ny lahateny nataony no nilazan’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andrianirina Laza Eric Donat, fa: “hobeazina amin’ny alalan’ny atrikasa samihafa ny olona mba handà kolikoly satria izany no hahafahana misoroka an’ireo trangana fahalovana”. “Raha tsy mandaitra ny fisorohana, dia hiroso amin’ny fanaovana fanadihadiana sy fanangonana porofo isika ka hatolotra any amin’ny fitsarana mahefa ny raharaha. Anjaran’izy ireo, avy eo, ny manasazy an’ireo mpanao kolikoly”, hoy izy. Tetsy an-danin’izany dia nohazavain’ny tale jeneralin’ny CRM, Ralisoa Alice fa: “mba hialana amin’ny trangana fanodinkodinam-bola toy ny niseho tato amin’ny Vokovoko Mena teo aloha teo no antony hiarahana miasa amin’ny Bianco izao”. Nicoh Richman L’article Ady amin’ny fahalovana :: “Hanabe ny olona handà kolikoly isika”, hoy ny tale jeneralin’ny Bianco est apparu en premier sur AoRaha.